China Model: JM272QE-144Hz ifektri abakhiqizi | Isibonisi Esiphelele
Ukubukwa kwe-QHD kusekelwa ngokukhazimulayo isilinganiso esisheshayo esisheshayo se-144hz ukuqinisekisa ukuthi ukulandelana okuhamba ngokushesha kuvela bushelelezi futhi kunemininingwane eminingi, kukunikeze lowo mkhawulo owengeziwe lapho udlala. Futhi, uma unekhadi lemidwebo le-AMD elihambisanayo, ungasebenzisa ngokunenzuzo ubuchwepheshe be-FreeSync eyakhelwe qapha ukuqeda ukudabuka kwesikrini nokuthungatha lapho udlala. Uzokwazi futhi ukuhambisana nanoma yimaphi amamarathoni amageyimu asebusuku, njengoba umqaphi efaka imodi yesikrini enciphisa ukuvezwa kokukhishwa kokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka futhi okusiza ukuvikela ukukhathala kweso.
Isikhathi Sokuphendula se-MPRT 1ms kanye Nesilinganiso sokuvuselela esingu-95Hz
Khombisa izixhumi ze-Port + HDMI
Akukho ukungingiza noma ukudwengula nge-AMD FreeSync Technology
Iphaneli le-IPS liletha ama-engeli abukwayo angcono
I-FlickerFree ne-Low Blue Mode Technology
Yini isilinganiso sokuvuselela?
Into yokuqala okudingeka siyisungule ukuthi “Siyini impela isilinganiso sokuvuselela?” Ngenhlanhla akuyona inkimbinkimbi kakhulu. Izinga lokuvuselela limane nje linani lezikhathi lapho isibonisi siqabula khona isithombe esisikhombisa ngomzuzwana. Ungakuqonda lokhu ngokukuqhathanisa nezinga lohlaka kumafilimu noma emidlalweni. Uma ifilimu idutshulwa ngozimele abangama-24 ngomzuzwana (njengokwejwayelekile yebhayisikobho), okuqukethwe komthombo kukhombisa kuphela izithombe ezi-24 ezihlukile ngomzuzwana. Ngokufanayo, isibonisi esinezinga lokubonisa elingu-60Hz sikhombisa "ozimele" abangama-60 ngomzuzwana. Akuwona amafreyimu ngempela, ngoba isibonisi sizovuselela izikhathi ezingama-60 ngomzuzwana noma ngabe kungekho ushintsho olulodwa lwe-pixel, futhi isibonisi sikhombisa kuphela umthombo ophakelwe kuso. Kodwa-ke, ukufanisa kuseseyindlela elula yokuqonda umqondo oyisisekelo wesilinganiso sokuvuselela. Izinga lokuvuselela eliphakeme ngakho-ke lisho amandla okuphatha isilinganiso sohlaka oluphakeme. Khumbula nje, ukuthi isibonisi sikhombisa kuphela umthombo ophakelwe kuso, ngakho-ke, isilinganiso esiphakeme sokuvuselela kungenzeka singathuthukisi umuzwa wakho uma isilinganiso sakho sokuvuselela sesivele siphezulu kunesilinganiso sohlaka lomthombo wakho.
Uma uxhuma umonitha wakho kwi-GPU (Graphics Processing Unit / Graphics Card) umqaphi uzobonisa noma yini i-GPU eyithumela kuyo, kunoma yiliphi izinga lohlaka eliyithumelayo, noma ngaphansi kwezinga eliphakeme lohlaka lwesiqapha. Amanani wozimele asheshayo avumela noma yikuphi ukunyakaza ukuthi kunikezwe esikrinini ngokushelela (Umdwebo 1), ngokufiphaza kokunyakaza okuncishisiwe. Lokhu kubaluleke kakhulu lapho ubuka ividiyo esheshayo noma imidlalo.
Isilinganiso sokuvuselela nokudlala
Yonke imidlalo yevidiyo ihlinzekwa yi-computer hardware, noma ngabe iyiphi ingxenyekazi yayo noma ihluzo. Kakhulu (ikakhulukazi epulatifomu le-PC), amafreyimu akhafulwa ngokushesha okukhulu njengoba kungenziwa, ngoba lokhu kuvame ukuhumushelwa kumdlalo wegeyimu obushelelezi futhi omuhle. Kuzoba nokubambezeleka okuncane phakathi kohlaka ngalunye futhi ngaleyo ndlela kube khona okusalela okuncane.
Inkinga engenzeka kwesinye isikhathi kulapho ozimele behlinzekwa ngokushesha kunenani lapho isibonisi siqala khona kabusha. Uma unesibonisi esingu-60Hz, esisetshenziselwa ukudlala umdlalo ohlinzeka ngozimele abangama-75 ngomzuzwana, ungahlangabezana nento ebizwa ngokuthi “ukudwengula isikrini”. Lokhu kwenzeka ngoba isibonisi, esamukela okokufaka kusuka ku-GPU ngezikhathi ezithile ezijwayelekile, kungenzeka sibambe i-hardware phakathi kozimele. Umphumela walokhu ukudabuka kwesikrini nokunyakaza okungafani, okungalingani. Imidlalo eminingi ikuvumela ukuthi ubambe isilinganiso sakho sohlaka, kepha lokhu kusho ukuthi awusebenzisi i-PC yakho ngokusemandleni ayo. Kungani usebenzisa imali eningi ezintweni zakamuva nezikhulu njengama-GPU nama-CPU, ama-RAM ne-SSD uma uzobopha amakhono abo?
Siyini isixazululo kulokhu, ungazibuza? Izinga eliphakeme lokuvuselela. Lokhu kusho ukuthi ukuthenga i-120Hz, 144Hz noma i-165Hz yokuqapha ikhompyutha. Lokhu kukhonjiswa kungaphatha kufinyelela ku-165 ozimele ngomzuzwana futhi umphumela uyi-gameplay ebushelelezi kakhulu. Ukuthuthuka kusuka ku-60Hz kuye ku-120Hz, 144Hz noma 165Hz umehluko obonakalayo kakhulu. Kuyinto okumele uzibone yona ngokwakho, futhi awukwazi ukuyenza ngokubuka ividiyo yayo kwisibonisi se-60Hz.
Izinga lokuvuselela elijwayelayo, nokho, ubuchwepheshe obusha bokusika obuya ngokuya buba bukhulu kakhulu. INVIDIA ibiza le G-SYNC, ngenkathi i-AMD iyibiza ngeFreeSync, kepha umqondo oyinhloko uyefana. Isibonisi esine-G-SYNC sizobuza ikhadi lemidwebo ukuthi liletha ngokushesha kanjani amafreyimu, futhi liguqule isilinganiso sokuvuselela ngokufanele. Lokhu kuzosusa ukudwengulwa kwesikrini nganoma yisiphi isilinganiso sefreyimu kuze kufike ezingeni eliphakeme lokuqabula lomqaphi. I-G-SYNC ubuchwepheshe iNVIDIA ekhokhisa imali ephezulu yamalayisense futhi bungangeza amakhulu amadola entengo yokuqapha. I-FreeSync ngakolunye uhlangothi ubuchwepheshe bomthombo ovulekile obuhlinzekwa yi-AMD, futhi bengeza kuphela inani elincane ezindlekweni zokuqapha. Thina ku-Perfect Display sifaka iFreeSync kuwo wonke ama-monitor wethu wokudlala njengokujwayelekile.
Ngabe kufanele ngithenge ukuhambisana kwe-G-Sync neFreeSync ukuqapha imidlalo?
Ngokuvamile, i-Freesync ibaluleke kakhulu kwezokudlala, hhayi nje ukugwema ukudwengula kepha nokuqinisekisa umuzwa ophelele jikelele. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma usebenzisa i-Hardware yemidlalo ekhipha amafreyimu amaningi kunokuba isibonisi sakho singaphatha.
I-G-Sync neFreeSync yizixazululo kuzo zombili lezi zinkinga ngokwenza ukuvuselelwa kwesiboniso ngejubane elifanayo njengoba ozimele behlinzekwa yikhadi lemidwebo, okuholele ekudlaleni okushelelayo, okungakhali.
Ukuboniswa kobubanzi obuphezulu (i-HDR) kudala ukuqhathanisa okujulile ngokukhiqiza ibanga eliphakeme lokukhanya. Ukuqapha i-HDR kungenza okuvelele kubonakale kukhanya futhi kulethe izithunzi ezicebile. Ukuthuthukisa i-PC yakho ngesiqaphi se-HDR kuwufanele uma udlala imidlalo yevidiyo ngemidwebo esezingeni eliphakeme noma ubuka amavidiyo ngesinqumo se-HD.
Ngaphandle kokungena ngokujulile emininingwaneni yezobuchwepheshe, isibonisi se-HDR sikhiqiza ukukhanya okukhulu nokujula kombala kunezikrini ezakhelwe ukuhlangabezana namazinga amadala.
1MS Isikhathi Sokuphendula kunciphisa ukuphefumula nokufiphaza ngenkathi kuguqulwa amaphikseli, kuhlala kugcinwa isitha nendawo ngokugxile ngesikhathi sokuxokozela.
Ukukhishwa kombala we-10 Bit ingamela phakathi kuka-0000000000 kuya ku-1111111111 kumbala ngamunye obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka nophuzi, okusho ukuthi umuntu angamela imibala engama-64x ka-8-bit. Lokhu kungakhiqiza kabusha imibala engu-1024x1024x1024 = 1,073,741,824 imibala, okuyinani elikhulu impela kunemibala engaphezu kwengu-8. Ngalesi sizathu, ama-gradients amaningi asesithombeni azobukeka abushelelezi njengasesithombeni esingenhla, futhi izithombe eziyi-10 bit zibukeka kangcono kakhulu kunozakwabo abangama-8-bit.
Langaphambilini Imodeli: YM25BFN-165Hz
Olandelayo: Imodeli: OG34RWA-165Hz